आमाले घरमै केटा ल्याएर सुत्ने गरेको सानो छोराहरूले रुँ’दै सुनाए (भिडियो हेर्नुहोस्) – Patrika Nepal
मंग्सिर १८, २०७८ शनिबार 49
मोरङ जिल्लाको बेलबारी नगरपालिका ४ का प्रेम तामाङ वैदेशिक रोजगारिमा साउदी बस्दै आएको करिव २२ वर्ष भै सकेको छ । उनले बिबाह गरेको पनि १९ वर्ष पुगि सक्यो । तर अहिले भने उनकी श्रीमतिले आफुले कमाएको सबै लिएर हिडे पछि उनी खोजीका लागि सहयोग माग्दै मिडियामा आएका छन । आफू बिदेश मै हुदाँ श्रीमती बिष्णु तामाङ अर्कैसगँ हिडेको प्रेम्को भनाई रहेको छ । श्रीमती दुई वर्ष अघि देखि फरार भएको उनले बताएका छन । आफुले सबै तिर खोजी गर्दा पनि पत्ता नलागेको उनको भनाई छ ।
प्रेमका अहिले दुई छोरा रहेका छन । उनी दुई छोराका साथा श्रीमतिको खोजीका लागि मिडियामा आएका हुन । श्रीमतिले आफुले कमाएर किनेको सम्पुर्ण जग्गा धितोमा राखेको, सहकारी लगायतबाट ऋण झिकेको र भाईको १० लाख गरि करिव ५०/६० लाख रुपैयाँ लिएर अर्कैसगँ हिडेको उनले बताएका छन । बिबाह गरेर आफू बिदेश गएदेखी घर खर्च, छोराछोरीको पढाइ इत्यादी पैसा पठाएको उनलाई हिसाब छैन । तर आफुले २२ वर्ष देखि कमाएर खर्च पठाएको बाहेक नै त्यति लिएर हिडेको उनले बताए ।
आफुले घर खर्च, र छोराहरूको पढाईको खर्च पठाउँदा पनि लाग्ने भन्दा केही बढी नै पठाईदिने गरेको प्रेम बताउँछन । तर त्यो हिसाब नगरी जग्गा, ऋण इत्यादी कै हिसाब गर्दा लगभग ६० लाख जति हुने उनको भनाई छ । उनी इटहरीका दिलक श्रेष्ठ नाम गरेको ब्याक्तिसगँ हिडेको भन्ने आफुले बुझेको प्रेमले बताए । अहिले उता गएर बिष्णुले छोरी जन्माएको भन्ने खबर आफुले सुनेको बताए । तर उनिहरु कहाँ छन त्यो स्पष्ट आफुलाई थाहा नभएको प्रेमले बताए ।
आफुलाई भने श्रीमती त्यसरी पहिले अरु सगै बोल्ने, हिड्ने गरेको केही थाहा नभएको प्रेम बताउँछन । आफू बिदेशमा डिउटी सकेर केही समय बोल्ने गरेको आफु बोल्दा श्रीमती पनि राम्रै बोल्ने गरेको उनले बताए । बिदेश बसेर यहाँ कसरी थाहा हुनु र भन्ने उनको प्रश्न छ । बाहिर गाउँ छिमेकबाट पनि आफुले त्यस्तो केही नसुनेकोले कुनै शंका गर्ने ठाउँ नभएको उनले बताए । आफुले बिदेशबाट आवश्यक पर्यो भन्दा पैसा पठाउने गरेको बताए । आफू घर आउने भन्दा अगाडि नै श्रीमती हिडेको उनले बताए ।
उनका छोराले भने गाउँकै एक आन्टिकोमा आउने दिपक आफ्नो घरमा पनि आउने गरेको र राती पनि त्यही सुत्ने गरेको बताए । आमाले उक्त ब्याक्तीलाई दाजु भन्दै बोलाउने गरेको बताए । दिपकको बहिनी त्यही भएकोले उनी बहिनिकोमा आउदा आफ्नो घरमा पनि आउने गरेको उनले बताए । सधै आउने जाने, बस्ने गरेकोले आफ्नै मान्छे होला भन्ने लागेर आफुले बाबालाई त्यसबारेमा केही नभनेको छोराको भनाई छ । श्रेमती सम्पर्कमा आएर आफ्नो ब्याबहार मिलाउनु पर्ने प्रेमको माग छ ।(भिडियो हेर्नुस)
Prevसोनिकाले सबैथो’क दिँ’दा पनि विहे गर्न न’मा’न्ने युवा को हुन् त ?
Nextडोटीकी सुजल ! सुन्न अनि बोल्न सक्दीनन् ! तर संसार नै चकित पार्ने कला छ उनमा – भिडियो हेर्नुहोस्
अ;प्रेसन फे’ल भएपछि अनितामा आयो स्वास्थ्यमा सुधा’र !